The masaf qarsoon CPA 2.0 - Sidee In la abuuro wax ku ool ah masaf Simple - Masaf Of The Day
The masaf qarsoon CPA 2.0 – Sidee In la abuuro wax ku ool ah masaf Simple
Hello Jesisco halkan,
Afeef Big : Natiijada ma aha caadiga ah. Ma balanqaaday waxaad heli doontaa natiijada isla. laga yaabaa in aad ka yar, ma jiro ama ka sareeya. Waa dhan ilaa aad si.
Waad ku mahadsan tahay wax badan u xiisaha aad Qarsoon version masaf CPA 2.0. Waxaan ka dhigtay shaqo badan geliyey this si aan idiin tuso si faahfaahsan sida ugu badan ee suurtogalka ah tallaabooyinka saxda ah aan ka lahayn istaraatijiyad si ay u noqdaan sucessful sida affiliate CPA ah in ka yar qaaday 21 maalmood.
Waxaan dhisay masaf dhamaystiran idiin, aad u soo dejisan karo oo lacag la'aan ah marka uu dhamaado ama haddii aad jeceshahay in aad ka baran karto si ay u naftaada dhisi. Waxaan ka dhigtay in ay suurto gal bogga soo socda la tallaabo by barashada talaabo for free.
Laakiin wax ugu horeysay ugu horeysay…
Waa maxay Suuq CPA
CPA Suuq ama Qiimaha halkii afku (CPA), sidoo kale loo yaqaan “Qiimaha halkii tallaabo” ama bixiso halkii afku (PPA) iyo qiimaha halkii diinta, waa model binta advertising online halkaas xayeysiiyaha bixisaa helitaanka cayiman – tusaale ahaan sale a, click, ama foomka soo gudbiyaan (tus, codsi xiriir, warsidaha saxiixdo, diiwaangelinta iwm).
Waxaad xaq u yeelan guddi ama lacag ka tahay horumarinta dalabyo CPA ama apps.
Horumarinta waxaa la samayn karaa iyada oo loo marayo :
 xilli Email
 Search (matoorada search)
 warbaahinta Social ...
Wax kasta oo hab ogol…
Uma baahnid in aad si ay u abuuraan aad alaabta u gaar ah oo ay la socoto taageerada macmiilka sida suuq CPA ah ka qaban. Oo haddii xaq u sameeyey waxay noqon kartaa mid aad u faa'iido sida model ganacsi.
Waxa aad u baahan si ay u guulaystaan ​​waa : aqoon + tallaabo
Waxaad heli doontaa mid ka mid ah marka hore halkan (aqoon). Qaadashada tallaabo idinkaa. Haddii aan u dhaqmaan aadan waxaad arki doontaa wax. Waan ka xumahay in aan idhaahdo,. Laakiin waxaan doonayay inuu sameeyo waxa aad u cad kuu.
The shabakadaha CPA Best
Qaar ka mid ah dalabyada ama apps idiin keeni dhexeeya $0.1 si ay u $15 per dhameystirtay tallaabo. Oo iyana waxay la waayay on shabakadaha CPA ugu caansan. Oo gabi ahaanba bilaash ah inuu ku biiro. Waxaan kula talinayaa inay doortaan hal iyo dhegi in ay sida newbie a.
The masaf CPA Best
Aan ka soo qaadno this – Waxaan ku qaatay $20 si aad u hesho gaadiidka (100 clics beegsaday) si kor loogu qaado dalab CPA ah in uu bixiyo $ 2 / tallaabo dhameystirtay.
siyaabo commoun The
Guud ahaan halkan waa sida ay dadka u qaadaan dalabyo CPA : Waxay la wado gaadiidka bogga soo degtey ay (page a cadaadi / page presell a / site a ...) iyo sida ugu dhaqsaha badan rajada ku biiro liiska waraaqaha ay, uu wareejiyey dalab CPA. Habkani shuqullada. Laakiin waa yar faa'iido badan aan «CPA masaf qarsoon» hal.
Halkan waxaa ku qoran natiijada caadiga ah ka 100 qasabno
aan ka helnay 40 optins
Waayo, 37% Heerka diinta ka helnay 15 falalka idleeyay.
Taasi $30 sida dakhliga
$10 faa'iido. Waxaan ku qanacsanahay in faa'iido.
Mararka qaarkood dadka la wado gaadiidka si toos ah u bixisaan iyo aad u hesho guud ahaan ka yar 10% heerka diinta.
Halkan waxaa ku qoran natiijada caadiga ah ayaa sidoo kale ka 100 qasabno
10 falalka idleeyay
Taasi $20 sida dakhliga
$0 ma waayi maayo faa'iido. Ma nihin ganacsiga.
Qarsoon CPA masaf – Habka cusub inuu shil guddiyada CPA
Waxaad u baahan tahay «masaf CPA qarsoon» a ka hor draffic wadista.
Waa maxay a «qarsoon masaf CPA» ?
Waa masaf dhisan dalabyo CPA badan u ogolaanaya in ay laba ama xataa saddex laabmaan aad «faa'iidada» laga gaadiidka isla. Waxay u dhawdahay inay kaa caawinaysaa in aad si ay u sameeyaan guddiyo LACAG LA'AAN.
(afeef: qaar ka mid ah waxaa ku jira links affiliate)
Waxaad u baahan tahay lahaa ka dib markii qalabka si ay u dhigay aad masaf CPA qarsoon :
 goobta A (magaca domain) iyo / ama clickfunnel
 3 si ay u 4 CPA dalabyo (dalabyo Affiliate aad u shaqeeyaan)
Hab-The – The Falsafadda masaf qarsoon CPA
Oon u kaxaynayno our beegsaday 100 clics bogga degtey. Ay clic ugu horeysay keenaysaa in dalabyo. Ka hore waa dalab CPA ah ($2 haddii dhameystirtay) iyo tan labaad waa page optin our.
Oo haddii aan sii aanta isla, halkan waa waxa aynu sida natiijada :
From 100 clics aan ka helnay 40 optins.
raadad kasta optin waxaa lagu wareejiyey bogga xaqiijin meesha clic loo laablaabi by a 2 mar kale. The ugu horeysay ee CPA kale dalab ($2 haddii dhameystirtay) iyo labaad u dhaco si aad u mahad bogga.
Waxaan leenahay 2 CPA bixisaa on page in in la dhamaystiro. $2/tallaabo.
Ku dhowaad aan laga yaabaa $2+$2+(2*$2)= $ 8 / hogaanka
Taasi ka badan $320 Waayo, kuwaas oo dhan 40 optins. Aan ku xuso in aad weli kor laga yaabaa dalabyo thorugh a 5 day email series. faa'iido ah $300 waxaana dhismaha our liiska LACAG LA'AAN.
Taasi waa waxa aan soo wac «qarsoon masaf CPA». masaf taas oo ka caawisa inay bank $ 6-8 $ / hogaanka ka ah $2 CPA dalab. heshay The sare ka fiican.
Haddii aad ku socoto in la abuuro noocan oo kale ah masaf, ii soo sheeg haddii aad u baahan tahay caawimaad ama faahfaahin dheeraad ah .... Ama booqo aan talaabo tutorial tallaabo halkan.
Ka hor inta aadan, halkan waxaa laguugu sameeyo, waayo, waxaad masaf, haddii aadan haysan waqti ay ku dhisi idinkaa. inaan anigu waxaan iyada u wadaaga iyada oo clickfunnels si aad u baahan tahay xisaab ah si ay u soo dejisan. Riix halkan si aad idinkaa abuuro iyo riix halkan si aad u dejisan aad masaf CPA qarsoon.
Hadda waxa soo socda? Qaado tallaabo oo bilaabi waddooyinka baabuurta si aad masaf. Sifudud.
Wixii taageero dheeraad ah, waxaad email noogu soo diri kartaa [email protected]
Waxaanan idiin rajaynayaa ugu wanaagsan oo dhan
-Masaf ee Kooxda maalintii